फोन गर्नुस्, घरमै आइपुग्छ माटो ब्राण्डको फलफूल तथा तरकारी :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
फोन गर्नुस्, घरमै आइपुग्छ माटो ब्राण्डको फलफूल तथा तरकारी
काठमाडौं, असार २५
तपाइँको घरमा फलफूल तथा तरकारी सकिएको छ? एक कल फोन गर्नुस् घरमै आइपुग्छ। गोल्यान समुहले माटो ब्राण्डको फलफूल तथा तरकारी घरमै डेलिभरी गर्दै आएको छ। काेभिड-१९ लाइ मध्येनजर गरेर समुहले हाेम डेलिभरीकाे सेवा सुरु गरेकाे हाे।
समुहसँग अर्ग्यानिक तथा विषादीरहित तरकारी तथा फलफूल रहेका छन्। समुहले केही सामान आफ्नै त केही सामान अन्य किसानसँग लिएर बेच्ने गरेकाे छ।
अर्डरका लागि उपभोक्ताले ९८०१०६१८६१ वा ९८०१०६८०९४ नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने गोल्यान एग्रोकी निर्देशक लतिका गोल्यानले बताइन्।
‘हामी उपभोक्तालाई अनलाईन अर्डरको लागि पनि योजना बनाइरहेका छौं। अहिले भने कल सेन्टरमार्फत् नै अर्डर लिइरहेका छौं,’ उनले भनिन्।
उनकाअनुसार ग्राहकले न्यूनतम ५ सय मूल्य बराबरको सामान अर्डर गर्नुपर्ने छ। डेलिभरी शुल्क भने लाग्ने छैन।
कम्पनीले काठमाण्डु, भक्तपुर तथा ललितपुरमा सेवा दिइरहेको छ। उनकाअनुसार ग्राहकले न्यूनतम ५ सय मूल्य बराबरको सामान अर्डर गर्नुपर्ने छ। सामान २४ घण्टा भित्रमा डेलिभरी हुने छ। डेलिभरी शुल्क भने लाग्ने छैन।
साथै समुहले नेपालमै बनेको स्यानिटाइजर पनि बेच्न थालेको छ। उक्त स्यानिटाइजर ५० मिलिलिटर, ७५ मिलिलिटर, ५ सय मिलिलिटरमा उपलब्ध रहेको छ।
समुहसँग करेला, भिण्डी, गोल्भेडा, प्याज, काँक्रो, मुला, मस्यौरा, च्याउ, निउरो, रायोको साग, बन्दा, काउली, खुर्सानी, फर्सिको मुन्टा धनिँयालगायतका मौसमी तरकारी रहेको छ। त्यस्तै केरा, आँप, स्याउ, खर्बुजा, भुइँकटर, मेवालगायतका फलफूल रहेका छन्।
तरकारी तथा फलफूलको मूल्य भने माटोको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/MatoNepal र इन्स्टाग्राममा दैनिक राखिने निर्देशक गोल्यानले बताइन्।
‘हामीले उपभोक्तालाई सहज होस् भनेर हामीसँग भएका तरकारी तथा फलफूलको सूची र मूल्य दैनिक फेसबुक पेज र इन्स्टामा राख्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ग्राहकले त्यहीँ हेरेर अर्डर गर्न सक्नेछन्।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २५, २०७७, ०६:१३:००
जसले नेपाली सिनियर क्रिकेटरलाई सिकाए तर आधिकारिक प्रतियोगिता खेलाउन पाएनन्
राष्ट्रियसभा चुनाव: १९ सिटमा को कहाँ विजयी, ७ सिट गुमाए पनि एमाले नै पहिलो दल
देशैभर ‘क्लिन स्वीप’ गर्ने सत्ता गठबन्धनको योजना विफल बनाउने शेर्पा को हुन्?
डेढ करोड लगानीमा खुलेको 'बार्दली', लन्डनमा सिकेको सीप सदुपयोग
भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध एक अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा सत्ता गठबन्धनको जितपछि जे देखियो...
डेढ करोड बढीको खुद्रा सामान बोकेको ट्रक प्रहरीको नियन्त्रणमा
स्थानीय चुनावसम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाझिएकै हो? दुई कानुनविदको फरक धारणा
बतासमाथि कारबाही, धर्मशाला ठेक्का दिने पदाधिकारीलाई भने पुरस्कार
गाउँका सुन्तला बिक्रीबाट सहरमा घडेरी
सुन्तला बिक्रीबाट एउटै गाउँमा भित्रियो साढे दुई करोड
दूधको मूल्य समायोजन हुँदै
पदमबहादुरले कसरी फलाए १४ किलोका दुइटा मुला?
भुसभन्दा सस्तो चामल!
शिवसताक्षी नगरले सुरू गर्‍यो उन्नत जातका बाख्राको बीऊ
के खाद्य अनुदानमा निर्भर किसान साँच्चै 'अल्छी' हुन्? योगराज गौतम
'इज्जतको ख्यालै नगरी गई, कुन मुख देखाउलान् बाआमाले समाजमा?' ज्योति मिश्र
मास्टर्नी आमा! अश्विना ढकाल
राम्रो खानदानका खराब श्रीमान्! गितु गैरे
डियर कम्रेड! सुरज खनाल
प्रयास गरे अवश्य पुगिन्छ आफ्नो लक्ष्य र गन्तव्यमा अच्युतमान सिंह प्रधान 'उत्सुक'
यो सम्बन्धको नाम के? अमर पौडेल